အိမျမှာ ဖုနျတကျနတေဲ့ စမတျဖုနျးဟောငျးတှကေို ဘယျလို အသုံးခမြလဲ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > အိမျမှာ ဖုနျတကျနတေဲ့ စမတျဖုနျးဟောငျးတှကေို ဘယျလို အသုံးခမြလဲ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 12:45 PM Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ, Moblie Knowledge, နည်းပညာဗဟုသုတ
[Unicode] ဖွငျ့ဖတျရနျအိမျမှာ စမတျဖုနျး ဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးမရှိသူ ခပျရှားရှားရယျ။ အတျောမြားမြားသညျ လုံးဝပကျြသှားလို့ မဟုတျဘဲ မျောဒယျ ဟောငျးသှားသောကွောငျ့ မကိုငျခငျြတော့သဖွငျ့သာ ပဈထားခံရပွီး ခြောငျကွားမှာ ဖုနျတကျကာ လမျးဆုံးနရေသညျ။ စမတျဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးတှကေို ခြောငျကွားက ဆှဲထုတျပွီး ဖုနျခါလိုကျပါ။ သူတို့ကို ကောငျးကောငျး အသုံးခလြို့ရနိုငျမညျ့ နရောတှကေို အောကျမှာ အကွံပွု ဖျောပွပါမညျ။၁။ ebook ဖတျစကျအဖွဈ သုံးနိုငျသညျ။
မျောဒယျ ဟောငျးသှားလို့လေးတိလေးကနျ အလုပျလုပျနသေဖွငျ့ ခြောငျထိုးခံထားရသော ဖုနျးမြား၊ Tablet မြားသညျ ebook ဖတျစကျမြားအဖွဈတော့ ကောငျးကောငျး အသုံးဝငျလိမျ့မညျ။ စာဖတျဖို့အတှကျက ဖုနျးတှေ၊ Tablet တှကေို အလုပျမြားမြား ခိုငျးဖို့မလို။ ဖနျသားပွငျမှာ စာလုံးတှေ ပျေါနရေုံ၊ စာမကျြနှာလှနျလို့ ရရုံလောကျနဲ့တငျ လုံလောကျသညျ။ ebook ဖတျနိုငျသညျ့ Kindle၊ Kobo စသညျ့ Application မြားစှာရှိသညျ။ ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးတှကေို ဝိုငျဖိုငျဖွငျ့ အငျတာနကျ ခြိတျပေးထား လိုကျဦးမညျ ဆိုပါက ကိုယျဖတျထားသညျ့ စာမကျြနှာမြားကို မိမိ အမွဲကိုငျနသေညျ့ဖုနျး သဈ၊ Tablet သဈမြားထဲမှ အလားတူ Application မြားမှာလညျး တဈသားတညျး ဆကျဖတျသှားနိုငျမညျ။
၂။ ဒီဂဈြတယျ ရဒေီယို။
ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးမြားသညျ FM ရဒေီယိုအဖွဈ ကောငျးကောငျး အသုံးဝငျသညျ။ စားပှဲထောငျ့တှငျ အမွဲထားပွီး FM ရဒေီယို နားဆငျနိုငျသညျ။ ဝိုငျဖိုငျခြိတျပွီး အငျတာနကျ ရဒေီယို အကျပလီကေးရှငျးမြား Download လုပျထားဦး မညျဆိုပါက အငျတာနကျရဒေီယိုကိုပါ နားဆငျနိုငျသေးသညျ။ TuneIn Radio ကဲ့သို့ အငျတာနကျ ရဒေီယို application မြားသညျ မိမိစိတျကွိုကျ ရဒေီယိုလိုငျးမြား နားဆငျဖို့ အကောငျးဆုံး အဖျောမှနျမြား ဖွဈသညျ။
၃။ အိမျ လုံခွုံရေး ကငျမရာ။
ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးမြားကို ခြောငျကွိုခြောငျကွားတှငျ ဖုနျတကျခံပွီး သိမျးထားမညျ့ အစား အိမျထဲ တဈနရောရာတှငျ တပျဆငျကာ လုံခွုံရေး ကငျမရာ အဖွဈ အသုံးခလြိုကျပါ။ ပလပျပေါကျတှငျ ပလပျထိုးပွီး အမွဲဖှငျ့ ထားနိုငျသညျ။ အိမျမှ ဝိုငျဖိုငျဖွငျ့ ခြိတျထားဦးမညျဆိုပါက ကိုယျအပွငျသှားလြှငျပငျ ကိုယျ့စမတျဖုနျးမှ အိမျက စမတျဖုနျးဟောငျး ဆီခြိတျပွီး အိမျထဲမွငျကှငျးမြားကို ကွညျ့နိုငျမညျ။ Perch ကဲ့သို့ လုံခွုံရေး ကငျမရာ application မြားလညျး ရှိနသေညျ။ အခွား နှဈသကျရာ လုံခွုံရေး ကငျမရာ application မြားလညျး ဖုနျးဟောငျးထဲ Download ဆှဲထညျ့ထားနိုငျသညျ။
ဖုနျးမှာ၊ Tablet မှာ စာစီ စာရိုကျတာမြိုးက ပရိုဆကျဆာ စှမျး ရညျ မြားမြားစားစား မလို။ မျောဒယျဟောငျးသှားသညျ့ ပစ်စညျးမြားမှာပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပျနိုငျသညျ။ ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးထဲမှာ Microsoft Word, iA Writer စသညျ့ application မြား ထညျ့ထားပွီး bluetooth keyboard ဖွငျ့ ခြိတျကာ ပြျောပြျောကွီး စာရိုကျနိုငျသညျ။ ရိုကျပွီးလြှငျ ဝိုငျဖိုငျ ခြိတျကာ မိမိ ဖုနျးသဈဆီ ပို့လိုကျ နိုငျသညျ။ ထိုနညျးဖွငျ့ ဖုနျးသဈ၊ Tablet သဈမြား မလိုအပျဘဲ ဖှငျ့သုံးကာ ဘကျထရီ ကုနျရမညျ့ ကိစ်စ ဖွရှေငျးလိုကျနိုငျမညျ။
ဖုနျး၊ Tablet တှနေဲ့ သီခငျြးနားမထောငျသူဆိုတာ ခပျရှားရှားရယျ။ ကိုယျကိုငျနသေညျ့ ဖုနျးသဈ၊ Tablet သဈတှထေဲ သီခငျြးတှေ၊ ဗီဒီယိုတှေ ထညျ့ထားပွီး Memory အပွညျ့ခံ၊ အလေးခံနမေညျ့ အစား ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးတှထေဲ ထညျ့ထားပွီး သီခငျြးနားထောငျဖို့ အသုံးခလြိုကျပါလေ။ Bluetooth စပီကာမြားဖွငျ့ ခြိတျဆကျပွီး အခနျးထဲတှငျ သီခငျြးနားထောငျလို့ ရသေးသညျ။ အိပျရာဘေးမှာထားပွီး နားကွပျဖွငျ့လညျး နားထောငျနိုငျသေးသညျ။ ကားထဲတှငျ သပျသပျထားပွီး သီခငျြးဖှငျ့စကျ အဖွဈလညျး အသုံးခနြိုငျသေးသညျ။
ကောငျးနသေေးသော ဖုနျး ဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးတှေ အိမျမှာ ဒီအတိုငျးထားမညျ့ အစား အထိုငျဖုနျးအဖွဈ အသုံးခလြိုကျ ပါ။ Tablet ဟောငျးကို ဧညျ့ ခနျးထောငျ့ စားပှဲပျေါ တငျထားပွီး အဝေးကမိဘ ဘိုးဘှားတှဆေီ အငျတာနကျကနေ ဗီဒီယိုဖုနျးချေါဖို့ သုံးပါ။ မိသားစုလိုကျ ဧညျ့ခနျးစားပှဲမှာ ထိုငျပွီး အဝေးက မိဘ ဘိုးဘှားတှနေဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ စကား ပွောကာ အလှမျးဖွနေိုငျကွသညျ။ ဖုနျးဟောငျးကိုလညျး Skype, FaceTime စသညျ့ application မြားသှငျးထားပွီး ဧညျ့ခနျးထဲထား ထားလြှငျ အိမျကနေ မိတျဆှမြေားဆီ ဖုနျးချေါသညျ့အခါ ထိုဖုနျးသုံး ခွငျးဖွငျ့ မိမိသုံးနကေဖြုနျး ဘကျထရီကုနျ၊ ဖုနျးခကုနျ သကျသာမညျ။
စမတျဖုနျး၊ Tablet ကငျမရာနညျးပညာမြား ကောငျးမှနျလာမှုကွောငျ့ အရညျအသှေးမွငျ့ ဓာတျပုံမြားပါ ရိုကျနိုငျလာနရော ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးမြား၏ ကငျမရာမြားကို Scanner မြားအဖွဈလညျး ကောငျးကောငျး အသုံးခနြိုငျသညျ။ တကယျ့ Scanner မြားကဲ့သို့ အရညျအသှေးမွငျ့ ပုံရိပျမြား မဖမျးယူနိုငျသညျ့တိုငျ စာရှကျစာတမျးမြားကို PDF ဖိုငျအဖွဈသို့ ပွောငျးကာ လုပျငနျးခှငျမှာ ကောငျးကောငျးသုံးနိုငျနပွေီ။ CamScanner , Evernote Scannable စသညျ့ အပလီကေးရှငျးမြား ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးတှထေဲ ထညျ့ထားလိုကျ ရုံဖွငျ့ကငျမရာကို Scanner တဈလုံးအလား အသုံးခနြိုငျပွီ။
ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးတှထေဲ Dark Sky, WeatherBug, AccuWeather စသညျ့ application မြား ထညျ့ထားပွီး အိမျက ဝိုငျဖိုငျနဲ့ ခြိတျထားလိုကျပါ။ မိုးလဝေသ ဖနျသားပွငျ အဖွဈ ကောငျးကောငျး အသုံးဝငျမညျ။ ဧညျ့ခနျးနံရံဖွဈဖွဈ၊ အိပျခနျးပွတငျးဘောငျမှာဖွဈဖွဈ တငျထားလိုကျလြှငျ မနကျ အပွငျမထှကျခငျ တဈနတေ့ာ မိုးလဝေသ ခနျ့မှနျးခကျြမြား ကွညျ့နိုငျသညျ။ ထီးယူသငျ့ကယူ၊ အကငြ်္ီထူထူ ဝတျသငျ့က ဝတျ၊ ခပျပါးပါး ဝတျသငျ့က ဝတျသှားနိုငျမညျ။
ဖနျသားပွငျ အလငျးရောငျ တောကျသော ဖုနျး၊ Tablet မြားကို ညမှောငျမှောငျ အိပျရာထဲ သုံးနခွေငျးသညျ မကျြလုံး ထိခိုကျသလို၊ အိပျရေးလညျး ပကျြစနေိုငျသညျ။ ကိုယျသုံးနကေဖြုနျး ကို အံဆှဲထဲ ထညျ့ထားလိုကျပါ။ မနကျ နှိုးစကျပေးဖို့ ဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးတှကေို အသုံးခလြိုကျပါ။ Android, IOS ဖုနျးမြားတှငျပါသညျ့ မူရငျးနာရီ application မြားခညျြး သုံးနရေတာ ပငျြးလာလြှငျလညျး Wake, Timely စသညျ့ နှိုးစကျ application မြား သုံးနိုငျသညျ။
ယခုနောကျပျေါ smart TV မြားသညျ ဖုနျးဖွငျ့ခြိတျဆကျ အလုပျလုပျနိုငျသညျ။ ဖုနျးကို ရီမုတျကှနျထရိုးအဖွဈသုံးပွီး smart TV မြားကိုထိနျးခြုပျနိုငျသညျ။ ဖုနျးထဲသို့ သကျဆိုငျရာ ရီမုတျ ကှနျထရိုး application ထညျ့ထားရုံ။ ထိုတာဝနျကို ဖုနျးဟောငျးထံ လှဲပေးလိုကျပါ။ ဖုနျးဟောငျးထဲ application သှငျးပွီး ဧညျ့ခနျး စားပှဲပျေါတငျထားလိုကျပါ။
၁၁။ ဒီဂဈြတယျ ဓာတျပုံ ဘောငျ
စမတျဖုနျးဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးမြားကို စားပှဲပျေါ မှာဖွဈဖွဈ၊ နံရံမှာ ကပျပွီးပဲဖွဈဖွဈ ပလပျအမွဲထိုးထားကာ ဒီဂဈြတယျ ဓာတျပုံဘောငျအဖွဈ အသုံးခနြိုငျသေးသညျ။ ဖုနျး၊ Tablet မြားတှငျ မူရငျးပါသညျ့ Gallery အကျပလီကေးရှငျးကို သုံးနိုငျသလို၊ ဒီဂဈြတယျ ဓာတျပုံအလှခြိတျနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးထားသော Dayframe, Picmatic စသညျ့ application မြားကို အသုံးပွုနိုငျသညျ။
Ref: 11 alternative uses for an old smartphone or tablet (T3)
Writer : ဟိန်းထက် (internetjournal )
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန်အိမ်မှာ စမတ်ဖုန်း ဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းမရှိသူ ခပ်ရှားရှားရယ်။ အတော်များများသည် လုံးဝပျက်သွားလို့ မဟုတ်ဘဲ မော်ဒယ် ဟောင်းသွားသောကြောင့် မကိုင်ချင်တော့သဖြင့်သာ ပစ်ထားခံရပြီး ချောင်ကြားမှာ ဖုန်တက်ကာ လမ်းဆုံးနေရသည်။ စမတ်ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းတွေကို ချောင်ကြားက ဆွဲထုတ်ပြီး ဖုန်ခါလိုက်ပါ။ သူတို့ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချလို့ရနိုင်မည့် နေရာတွေကို အောက်မှာ အကြံပြု ဖော်ပြပါမည်။
၁။ ebook ဖတ်စက်အဖြစ် သုံးနိုင်သည်။
မော်ဒယ် ဟောင်းသွားလို့လေးတိလေးကန် အလုပ်လုပ်နေသဖြင့် ချောင်ထိုးခံထားရသော ဖုန်းများ၊ Tablet များသည် ebook ဖတ်စက်များအဖြစ်တော့ ကောင်းကောင်း အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ စာဖတ်ဖို့အတွက်က ဖုန်းတွေ၊ Tablet တွေကို အလုပ်များများ ခိုင်းဖို့မလို။ ဖန်သားပြင်မှာ စာလုံးတွေ ပေါ်နေရုံ၊ စာမျက်နှာလှန်လို့ ရရုံလောက်နဲ့တင် လုံလောက်သည်။ ebook ဖတ်နိုင်သည့် Kindle၊ Kobo စသည့် Application များစွာရှိသည်။ ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းတွေကို ဝိုင်ဖိုင်ဖြင့် အင်တာနက် ချိတ်ပေးထား လိုက်ဦးမည် ဆိုပါက ကိုယ်ဖတ်ထားသည့် စာမျက်နှာများကို မိမိ အမြဲကိုင်နေသည့်ဖုန်း သစ်၊ Tablet သစ်များထဲမှ အလားတူ Application များမှာလည်း တစ်သားတည်း ဆက်ဖတ်သွားနိုင်မည်။
၂။ ဒီဂျစ်တယ် ရေဒီယို။
ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းများသည် FM ရေဒီယိုအဖြစ် ကောင်းကောင်း အသုံးဝင်သည်။ စားပွဲထောင့်တွင် အမြဲထားပြီး FM ရေဒီယို နားဆင်နိုင်သည်။ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ပြီး အင်တာနက် ရေဒီယို အက်ပလီကေးရှင်းများ Download လုပ်ထားဦး မည်ဆိုပါက အင်တာနက်ရေဒီယိုကိုပါ နားဆင်နိုင်သေးသည်။ TuneIn Radio ကဲ့သို့ အင်တာနက် ရေဒီယို application များသည် မိမိစိတ်ကြိုက် ရေဒီယိုလိုင်းများ နားဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်များ ဖြစ်သည်။
၃။ အိမ် လုံခြုံရေး ကင်မရာ။
ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းများကို ချောင်ကြိုချောင်ကြားတွင် ဖုန်တက်ခံပြီး သိမ်းထားမည့် အစား အိမ်ထဲ တစ်နေရာရာတွင် တပ်ဆင်ကာ လုံခြုံရေး ကင်မရာ အဖြစ် အသုံးချလိုက်ပါ။ ပလပ်ပေါက်တွင် ပလပ်ထိုးပြီး အမြဲဖွင့် ထားနိုင်သည်။ အိမ်မှ ဝိုင်ဖိုင်ဖြင့် ချိတ်ထားဦးမည်ဆိုပါက ကိုယ်အပြင်သွားလျှင်ပင် ကိုယ့်စမတ်ဖုန်းမှ အိမ်က စမတ်ဖုန်းဟောင်း ဆီချိတ်ပြီး အိမ်ထဲမြင်ကွင်းများကို ကြည့်နိုင်မည်။ Perch ကဲ့သို့ လုံခြုံရေး ကင်မရာ application များလည်း ရှိနေသည်။ အခြား နှစ်သက်ရာ လုံခြုံရေး ကင်မရာ application များလည်း ဖုန်းဟောင်းထဲ Download ဆွဲထည့်ထားနိုင်သည်။
ဖုန်းမှာ၊ Tablet မှာ စာစီ စာရိုက်တာမျိုးက ပရိုဆက်ဆာ စွမ်း ရည် များများစားစား မလို။ မော်ဒယ်ဟောင်းသွားသည့် ပစ္စည်းများမှာပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်နိုင်သည်။ ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းထဲမှာ Microsoft Word, iA Writer စသည့် application များ ထည့်ထားပြီး bluetooth keyboard ဖြင့် ချိတ်ကာ ပျော်ပျော်ကြီး စာရိုက်နိုင်သည်။ ရိုက်ပြီးလျှင် ဝိုင်ဖိုင် ချိတ်ကာ မိမိ ဖုန်းသစ်ဆီ ပို့လိုက် နိုင်သည်။ ထိုနည်းဖြင့် ဖုန်းသစ်၊ Tablet သစ်များ မလိုအပ်ဘဲ ဖွင့်သုံးကာ ဘက်ထရီ ကုန်ရမည့် ကိစ္စ ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်မည်။
ဖုန်း၊ Tablet တွေနဲ့ သီချင်းနားမထောင်သူဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်။ ကိုယ်ကိုင်နေသည့် ဖုန်းသစ်၊ Tablet သစ်တွေထဲ သီချင်းတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ ထည့်ထားပြီး Memory အပြည့်ခံ၊ အလေးခံနေမည့် အစား ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းတွေထဲ ထည့်ထားပြီး သီချင်းနားထောင်ဖို့ အသုံးချလိုက်ပါလေ။ Bluetooth စပီကာများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အခန်းထဲတွင် သီချင်းနားထောင်လို့ ရသေးသည်။ အိပ်ရာဘေးမှာထားပြီး နားကြပ်ဖြင့်လည်း နားထောင်နိုင်သေးသည်။ ကားထဲတွင် သပ်သပ်ထားပြီး သီချင်းဖွင့်စက် အဖြစ်လည်း အသုံးချနိုင်သေးသည်။
ကောင်းနေသေးသော ဖုန်း ဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းတွေ အိမ်မှာ ဒီအတိုင်းထားမည့် အစား အထိုင်ဖုန်းအဖြစ် အသုံးချလိုက် ပါ။ Tablet ဟောင်းကို ဧည့် ခန်းထောင့် စားပွဲပေါ် တင်ထားပြီး အဝေးကမိဘ ဘိုးဘွားတွေဆီ အင်တာနက်ကနေ ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဖို့ သုံးပါ။ မိသားစုလိုက် ဧည့်ခန်းစားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး အဝေးက မိဘ ဘိုးဘွားတွေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကား ပြောကာ အလွမ်းဖြေနိုင်ကြသည်။ ဖုန်းဟောင်းကိုလည်း Skype, FaceTime စသည့် application များသွင်းထားပြီး ဧည့်ခန်းထဲထား ထားလျှင် အိမ်ကနေ မိတ်ဆွေများဆီ ဖုန်းခေါ်သည့်အခါ ထိုဖုန်းသုံး ခြင်းဖြင့် မိမိသုံးနေကျဖုန်း ဘက်ထရီကုန်၊ ဖုန်းခကုန် သက်သာမည်။
စမတ်ဖုန်း၊ Tablet ကင်မရာနည်းပညာများ ကောင်းမွန်လာမှုကြောင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံများပါ ရိုက်နိုင်လာနေရာ ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းများ၏ ကင်မရာများကို Scanner များအဖြစ်လည်း ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်သည်။ တကယ့် Scanner များကဲ့သို့ အရည်အသွေးမြင့် ပုံရိပ်များ မဖမ်းယူနိုင်သည့်တိုင် စာရွက်စာတမ်းများကို PDF ဖိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းကာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်နေပြီ။ CamScanner , Evernote Scannable စသည့် အပလီကေးရှင်းများ ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းတွေထဲ ထည့်ထားလိုက် ရုံဖြင့်ကင်မရာကို Scanner တစ်လုံးအလား အသုံးချနိုင်ပြီ။
ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းတွေထဲ Dark Sky, WeatherBug, AccuWeather စသည့် application များ ထည့်ထားပြီး အိမ်က ဝိုင်ဖိုင်နဲ့ ချိတ်ထားလိုက်ပါ။ မိုးလေဝသ ဖန်သားပြင် အဖြစ် ကောင်းကောင်း အသုံးဝင်မည်။ ဧည့်ခန်းနံရံဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ခန်းပြတင်းဘောင်မှာဖြစ်ဖြစ် တင်ထားလိုက်လျှင် မနက် အပြင်မထွက်ခင် တစ်နေ့တာ မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များ ကြည့်နိုင်သည်။ ထီးယူသင့်ကယူ၊ အင်္ကျီထူထူ ဝတ်သင့်က ဝတ်၊ ခပ်ပါးပါး ဝတ်သင့်က ဝတ်သွားနိုင်မည်။
ဖန်သားပြင် အလင်းရောင် တောက်သော ဖုန်း၊ Tablet များကို ညမှောင်မှောင် အိပ်ရာထဲ သုံးနေခြင်းသည် မျက်လုံး ထိခိုက်သလို၊ အိပ်ရေးလည်း ပျက်စေနိုင်သည်။ ကိုယ်သုံးနေကျဖုန်း ကို အံဆွဲထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ မနက် နှိုးစက်ပေးဖို့ ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းတွေကို အသုံးချလိုက်ပါ။ Android, IOS ဖုန်းများတွင်ပါသည့် မူရင်းနာရီ application များချည်း သုံးနေရတာ ပျင်းလာလျှင်လည်း Wake, Timely စသည့် နှိုးစက် application များ သုံးနိုင်သည်။
ယခုနောက်ပေါ် smart TV များသည် ဖုန်းဖြင့်ချိတ်ဆက် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဖုန်းကို ရီမုတ်ကွန်ထရိုးအဖြစ်သုံးပြီး smart TV များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဖုန်းထဲသို့ သက်ဆိုင်ရာ ရီမုတ် ကွန်ထရိုး application ထည့်ထားရုံ။ ထိုတာဝန်ကို ဖုန်းဟောင်းထံ လွှဲပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းဟောင်းထဲ application သွင်းပြီး ဧည့်ခန်း စားပွဲပေါ်တင်ထားလိုက်ပါ။
၁၁။ ဒီဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံ ဘောင်
စမတ်ဖုန်းဟောင်း၊ Tablet ဟောင်းများကို စားပွဲပေါ် မှာဖြစ်ဖြစ်၊ နံရံမှာ ကပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ပလပ်အမြဲထိုးထားကာ ဒီဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံဘောင်အဖြစ် အသုံးချနိုင်သေးသည်။ ဖုန်း၊ Tablet များတွင် မူရင်းပါသည့် Gallery အက်ပလီကေးရှင်းကို သုံးနိုင်သလို၊ ဒီဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံအလှချိတ်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားသော Dayframe, Picmatic စသည့် application များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Writer : ဟိနျးထကျ (internetjournal )
အိမျမှာ ဖုနျတကျနတေဲ့ စမတျဖုနျးဟောငျးတှကေို ဘယျလို အသုံးခမြလဲ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:45 PM Rating:5[Unicode] ဖွငျ့ဖတျရနျ အိမျမှာ စမတျဖုနျး ဟောငျး၊ Tablet ဟောငျးမရှိသူ ခပျရှားရှားရယျ။ အတျောမြားမြားသညျ လုံးဝပကျြသှားလို့ မဟုတျဘဲ မျောဒယ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:45 PM